50 Kununurwa Munamato Kumisidzana Uye Kunyadziswa | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 50 Kununurwa Munamato Kumanyadzi Uye Kunyadziswa
Isaya 61: 7:
7 Kana muchinyadziswa, muchapamhidzirwa kaviri; zvino nokuda kokumanikidzwa, vanofara pamiganho yavo; saka panyika yavo vachagara nhaka; vachava nemufaro usingaperi.
Shame uye kunyadziswa haisi chikamu chako semwana wekudzikunura. Jesu akabhadhara mutengo wako ruregerero, Akatambudzika kunyara kuti iwe neni tirege kutongonyara, saka kunyara kwese nekunyadzisa Dhiabhori akaisa muhupenyu hwako, ndinokuzivisa kununurwa kwako kwakazara muzita raJesu Amen !!!. Nhasi tichave tichiita munamato makumi mashanu emunamato wekunyadzisa kusanyadziswa uye kunyadziswa.
Chii chinonyadzisa? Izvi zvinongotsanangurwa senyika yekunyadziswa nevanhu kana mamiriro ezvinhu. Kunyadzisa kunongotsanangurwa sekunyadziswa paruzhinji nevanhu kana mamiriro ezvinhu. Kutambura kunyara hakuzi kuda kwaMwari kwauri, pane nyadzi dzese dzawakatambura semutendi, Mwari wangu achakupa mbiri yakadzoreredzwa muzita raJesu. Kunyara uye kunyadziswa ndiwo dambudziko raDhiabhori, saka tinofanira kuribata pamweya. Munamato wekununurwa pamusoro pekusanyara uye kunyadzisa chombo cha hondo yezvokunamata kuisa dhiabhori munzvimbo yake. Kuburikidza nemunamato uyu, tinenge tiri kuparadza kutambudzika kwese kwadhiabhori muhupenyu hwedu kunotinyadzisa uye nokunyadzisa. Munamato ndiyo kiyi yerudzi rwese rwekununurwa. Kana iwe uchinamata uine nzwisiso chaiyo yehukuru hwako mukutonga muna Kristu, hapana dhimoni rakadzingwa kubva kugehena rinogona kumira pamberi pako.
Handizive kuti ndeapi mamiriro ezvinhu ari kuunza kunyadziswa uye kunyadziswa muhupenyu hwako, iko kushaya mbereko, hurombo, hurwere, hukama hwakaputsika, roora rakaputsika nezvimwe ndinokukurudzira kuti uite minamato iyi yekudzikinura nekutenda kukuru nhasi. Mweya mutsvene wakandikurudzira kunyora izvi minamato yekununura nekunyadziswa nokunyadziswa, sezvaunonamata nhasi, uchanunurwa kubva munyadzi kusvika mukurumbira muzita raJesu Amen. Mwari vakukomborere.
1. Baba, ndinoparidza nhasi kuti ndakasimudzwa pamusoro pekunyadziswa, muzita raJesu.
2. Kutukwa kwakazara nhaka muhupenyu hwangu, ndinokuzivisa kuti haubatsiri uye zita rako, muzita raJesu.
3. Chero chero suwo rakaipa rakavhurika muhupenyu hwangu, isunganidzwa neropa raJesu, muzita raJesu.
4. Holy Ghost fire, tanga kusunga mweya wekusanyara uye unonyadzisa mune yese department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
5.Mweya Wakachena unotanga kundibhabhatidza nemweya wekutenda uno fambisa makomo mudhipatimendi rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
6.Mweya Mutsvene ndibhabhatidze nemweya wehungwaru mune yese department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
7.Mweya Mutsvene, ndibhabhatidze mweya wenyasha uye kuteterera mune dhipatimendi rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
8.Mweya Mutsvene, ndibhabhatidze nemweya wekushinga mune department rese rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
9.Mweya Mutsvene, ndibhabhatidze nemweya werudo mune yese department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
10.Mweya Wakachena ndibhabhatidze neni nekunaka kwako mune yese department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
11. Ini ndinoparidza kuti ndinonunurwa kubva kumadhimoni cage, muzita raJesu.
12. Ini ndinodzosera museve wese weurombo mudhipatimendi rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
13. Ini ndinouya kuzopesana neese yakavanzika uye yehungwaru dhizi remweya mune yese department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
14. Ini ndinosunga mweya wehurombo, muzita raJesu.
15. Ndinozvibvisa pachangu kubva pamusungo wese wemari, muzita raJesu.
16. Ini ndinosimudza mbeu yese yekutadza muhupenyu hwangu nemoto waMwari, muzita raJesu.
17. Ini ndinopwanya mweya wega wega wekuburitsa muhomwe mumari yangu, muzita raJesu.
18. Ini ndinoparadza nekuparadza basa rega rega revabudiriri vekubhururuka, muzita raJesu.
19. Kunyadziswa kwemari hakuzoenderera mberi kuve mynlot, muzita raJesu.
20. Handizotevedzera yakaipa nzira yekukundikana, muzita raJesu.
21. Akafa nhoroondo, hauzombove wangu mijenya, muzita raJesu.
22. Handisi kushandira kuti vamwe vadye, muzita raJesu.
23. Zvikomborero zvangu, hausi kuzembera maoko angu, muzita raJesu.
24. Ini ndinouya kuzopesana neanoshanda wese ehurombo mudhipatimendi rega rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
25. O Ishe, regai vatumwa vangu vabatsirwe vaparadzire ani naani akaipa anopihwa zita raJesu
26. Iwe masimba erima, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu izvozvi !!!, muzita raJesu.
27. Iwe masimba erima, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu hwekuchata izvozvi !!!, muzita raJesu.
28. Iwe masimba erima, sunungura kubata kwako pamusoro mari yangu izvozvi !!!, muzita raJesu.
29. Iwe masimba erima, sunungura kubata kwako pamusoro pehutano hwangu zvino !!!, muzita raJesu.
30. Iwe masimba erima, sunungura kubata kwako pamusoro pevana vangu izvozvi !!!, muzita raJesu.
31. Ishe, wedzerai gungwa rangu uye nyaradzai vavengi vangu muzita raJesu
32. Baba ishe, itai kuti mafashama ako ebudiriro aorese hupenyu hwangu, muzita raJesu.
33. O Ishe, nyarai uye munyadzise munhu wese akaipa anoteedzera kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
34. Chese museve wemweya wakadzika wakandipfekedza neuipi hwekumba, buda ufe izvozvi, muzita raJesu.
35. Wese mweya wekuruboshwe rwemberi wakayenda mukati mehupenyu hwangu kubudikidza nekuipa kweimba, buda izvozvi, muzita raJesu.
36. Ini ndinoremedza kupisa kwemukati mukati mehupenyu hwangu, muzita raJesu.
37. museve wese wekupenga mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, buda ufe zvino, muzita raJesu.
38. Chese museve cheurombo chero munzvimbo yehupenyu hwangu, buda ufe izvozvi, muzita raJesu.
39. Chese museve chekusabudirira mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, buda ufe zvino, muzita raJesu.
40. Chese museve wekudzokera kumashure mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, buda ufe zvino, muzita raJesu.
41. Miseve yega yega yekunyadzisa uye inonyadzisa mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, buda ufe zvino, muzita raJesu.
42. Chese museve chakaipa chemuvengi mumuviri wangu, buda kunze izvozvi ufe, muzita raJesu.
43. Miseve yega yega yakadzingwa pabhizinesi rangu, isapindirwe neropa raJesu, muzita raJesu.
44. Chese museve werufu uye gehena muhupenyu hwangu, buda ufe izvozvi, muzita raJesu.
45. Chero museve wakaipa wakabviswa chero nhengo yangu neuipi hwemba, svetuka izvozvi ufe, muzita raJesu.
46. ​​Ini ndinodhonza museve wese wakawisirwa mukati merangu nheyo dzezvakaipa mumba, muzita raJesu.
47. Miseve yega yega yekuisa kusindimara mumatambudziko angu, ibhururuka ufe, muzita raJesu.
48. museve wese wekusanyengetera, buda muhupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
49. Ini ndinosunungura kubva muuranda hwekusava nebasa hard ???, muzita raJesu.
50. Rega kubvunza kwakashata pamusoro pehupenyu hwangu kuitwe pasina zvakunobatsira uye nekushaiwa, muzita raJesu.
Previous nyaya300 Matipi Emunamato Kune Zvikomborero Zvemari
inotevera70 Mharidzo dzeMunamato Yekutyora Zvipingamupinyi
Ointe de Dieu June 1, 2021 Pa 9: 30 am
Merci beaucoup inodururira ces prières
20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nekutadza uye kuora mwoyo
20 Hondo dzeMunamato Pfungwa dzeKereke
10 Ndima dzeBhaibheri Kunyengetera Kana Iwe Ukavhiringidzika